MURAAYADDA WAAYAHA | Cadceed newssite
“Qormooyin lafaguraya duruufaha nololeed iyo xaaladaha taagan”
W/Q. Ahmed Rasheid Gulaid
Waa xilli adag. Waa abaar dad qalato ah iyo sebaan la adhax jabay. Abaaro baahay, daba-dheeraaday, jiitamay, oo hawaarsaday. Cirku wuu engagan yahay, dhulkuna waa arradan yahay. Xoola-dhaqatadii gabbal baas ayaa u dumay. Duunyadii si xawli ah ayay u le’anaysaa; tarab-tarab ayay u le’anaysaa. Xoolo macne leh oo maanta deegaannadaa lagu sheegi karaa ma jiraan. Meelo badan oo ka mid ah mandaqadda geeska ayay aafada abaartu isku fidisay. Gobollada bari ee Somaliland ayay si gaar ah u taabatay. Runtii aad baa looga dayrinayaa xaalka deegaannadaas, si ay noqon doonta na mooyi.
Dawladihii dalka xilkiisa la kala wareegay waxay wadaagaan jahli salka ku haya in aanay marna ku baraarugin halista iyo ayaan darrooyinka dalka ku soo socda. Waxa kale oo ay wadaagaan demmanaan la xidhiidha badbaadinta dalka aynaan dal kale uga guuri karin. Marnaba kama ay fikirin sida nololi uga suurtoobi karto dal aan dhir, xoolo iyo beero toona lahayn. Maantana, muxaafad iyo mucaaradba, nimanka ummadda hoggaaminteeda u heellani way isla wada maqan yihiin. Haddii garasho fayow oo hoggaamineed iyo garaad bisil oo bulsheed jiro, soo-bandhigista qorshe abaaraha soo noqnoqda lagula tacaalayaa waxa uu ka mid noqon lahaa barnaamijyada ugu mudan ee codadka lagu kala tirsanayo.
Rabbow gamashi baan taagannee, roobka nagu guud fur.” – Weedhsame.